Taliyaha Booliska soomaaliya JEN Saacid oo gadiid Boolisk ku wareejiyay Madaxda Galmudug iyo Puntland.
Home /Blog/Taliyaha Booliska soomaaliya JEN Saacid oo gadiid Boolisk ku wareejiyay Madaxda Galmudug iyo Puntland.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya JEN. C/xakiin Daahir Saciid (Saacid) ayaa maanta ilaa lix baabuur ku wareejiyay Maamuladda Galmudug iyo Puntland,kuwaaso ka so dagay Dakadda Magaalada Boosaaso todobaadkii hore.waxaana goob joog ahaa Madaxweyne ku xigeenada Galmudug iyo Puntland.
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland JEN C/qaadir Shire Faarax Erag ayaa isna geeskiisa sheegay in baabuurta afar ka mid ah lo qorsheeyay inay ku shaqeeyan ciidamada isku dhafka ah ee howlgalada ka bilaabidoona magaalada Gaalkacyo. sidoo kale, Taliye ku xigeenka booliska Maamulka Galmudug Xabeeb ayaa xusay in baabuurtan ay ciidamadu dhaqaalaysandoonan,una isticmaalidoonana howlaha dadweynaha.